आईपीओको किन यति धेरै आकर्षण ? – Today Nepal
आईपीओको किन यति धेरै आकर्षण ?
6 months ago Today Nepal
पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणको आईपीओप्रतिको क्रेज कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण चन्द्रागिरी हिल्स र इन्फ्रास्टक्चर बैङ्कको आईपीओको चर्चाले पुष्टि गर्छ । सेयर बजारप्रति खासै रुचि नराख्ने र जानकारीसमेत नभएकाहरु पनि अहिले आईपीओ भर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आईपीओप्रति अनेक खालको ट्रोलसमेत बनेका छन् । केही समयअघिसम्म पनि आईपीओ बिक्री नभएर समय थप गर्नुपर्ने अथवा पटक पटक बिक्रीका लागि सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था थियो ।
Tags: ekantipur, nepali latest news, online news, onlinekhabar, ratopati, share market
Next प्रचण्ड-माधव समूहको आकस्मिक बैठक बस्दै